Light Iron mandray an'i Sam Daley, mpandoko loko ambony ho an'ny lisitra New York | NAB Show News | 2021 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny Media sy ny mpamokatra ny Kat Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Unified Streaming dia manambara ny Unified Remix VOD2Live, izay ahafahan'ny mpamatsy OTT mamorona fantsona mivantana avy amin'ny tranomboky VOD
Home » Featured » Light Iron dia mandray an'i Sam Daley, mpandoko loko ambony, ho an'ny lisitra New York
Ny dian-tongotry ny mpanome tolotra serivisy mpanolotra tolotra veteranista ao amin'ny tsenan'i New York, mahatratra izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa lavitra.
Light Iron, fizarana serivisy famoronana taorian'ny P Production dia nandray ny lokon'ny Sam Daley ho an'ny talenta famoronana manan-talenta eo amin'ny indostria. Nanatevin-daharana ny ekipa ho mpandoko loko i Daley ary hiasa amin'ny toeram-pivarotana any New York, hanohana ny mpanjifa miaraka amina tetikasa manana endrika sy fizarana.
"Faly izahay mandray an'i Sam amin'ny fianakaviana Light Iron," hoy ny talen'ny fitantanana mpiara-miasa Light Iron, Seth Hallen. “Nandritra ny asany dia nanangana fifandraisana matanjaka be manodidina ny indostria i Sam, indrindra ny fiarahamonina New York. Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=fifampanohanay&oldid=XNUMX '' Ny mari-bolany dia tsy misy ilana azy ary maneho ny kalitaon'ny asa fantatra amin'ny Light Iron. Ny fahatongavan'i Sam dia taratry ny fanolorantenantsika ny tsenan'i New York sy ny fanohanana ny mpanjifanay na aiza na aiza amin'ny alàlan'ny fahazoana ny talenta tsara indrindra. Manantena izahay fa hanao fanambarana bebe kokoa mandritra ny taona momba ny fanitarana ny lisitray. ”
Daley dia nitondra traikefa 20 taona mahery tao amin'ny fiaraha-monina taorian'ny famokarana New York, niditra tao amin'ny Light Iron avy amin'ny Company 3. Taorian'ny nanombohany tamin'ny dailies ara-barotra tao DuArt, dia nampivelatra ny fahaizany tao amin'ny Tape House sy PostWorks izy talohan'ny nidirany tao amin'ny Technicolor. Tao izy dia nanisy mari-pamantarana dailies ho an'ny sasany amin'ireo famokarana lehibe indrindra any New York tamin'izany fotoana izany. Nampaherezin'ireo mpanao cinematographes izay niara-niasa taminy ho mpandoko loko dailies, nifindra tamin'ny loko farany izy.
Ny valim-panadinana voalohany nataon'i Daley dia nahitana ireo miniseries HBO Mildred Pierce ary ny endri-javatra indie malaza Martha Marcy May Marlene. Ahitana ny andiany ny kaontiny fahitalavitra hamotipotika, Girls, The Deuce, The Sinner ary Fifandimbiasana, sy ireo miniseries Fantatro fa marina izany ary Asehoy ahy ny mahery, ity farany izay nahazo ny fanolorana loka HPA tamin'ny taona 2016. Anisan'izany ny naoty nomeny Ny tetikasa Florida, Miala tsiny manelingelina anao ary Andro mahafinaritra ao amin'ny mpifanolo-bodirindrina.
"Ny ekipa Light Iron dia miara-miasa sy mieritreritra mialoha ary izany no fomba fiasako," hoy i Daley. “Mampientam-po ahy ny talen'ny fanampiana sy ny cinematographer manampy. Ny asa rehetra sy ny fitiavana lanin'izy ireo dia misy vokany eo amin'ny efijery eo alohanay. Io no ampahany manome valisoa indrindra amin'ny asa-tanako. ”
"Tombony lehibe ho ahy ny miasa ao amin'ny fianakavian'i Panavision," hoy i Daley nanampy. “Ny asako voalohany teo amin'ny sehatry ny indostria dia tao amin'ny departemantan'ny fanofana fakantsary ho fandalinana asa amin'ny sekolin-tsarimihetsika. Io traikefa io dia nahafahako nifandray tsara tamin'ny cinematographer rehefa niasa tany amin'ny laboratoara tany am-piandohan'ny asako aho. Ankehitriny, ny fiaraha-miasa dia afaka manomboka amin'ny fanomanana fakantsary! ”
Ireo mpanakanto Light Iron dia manome fahaiza-miasa miaraka, mahay mamorona amin'ny horonantsary asongadina, andian-tsarimihetsika ary fizarana endrika fohy. Daley dia hiorina miaraka amin'ny mpiara-miloko zokiolona Sean Dunckley any New York, miaraka amin'ny fahaizana miasa lavitra amin'ireo mpanao sarimihetsika manerantany. Ny lisitra bicoastal an'ny mpandoko loko farany dia misy ihany koa Ian Vertovec, Jeremy Sawyer, Scott Klein, Corinne Bogdanowicz, Nick Hasson, Ethan Schwartz ary Katie Jordan. Ireo mpanakanto ireo dia miara-miasa amin'ny mpamokatra sarimihetsika manomboka amin'ny famokarana, manampy ny cinematographers hamolavola ny endrik'izy ireo amin'ny fakana sary lehibe ary manome loharanom-baovao azo antoka hatramin'ny fakana sary ka hatramin'ny farany.
Ho fanampin'ny Light Iron's New York ary Los Angeles fotodrafitrasa, izay samy manolotra ny sanganasa feno amin'ny serivisy famaranana famoronana, ny orinasa dia manana toerana any Atlanta, Albuquerque, Chicago, New Orleans, Toronto ary Vancouver izay manome serivisy ho an'ny dailies sy ireo fotoana lavitra. Ny fahaiza-manao lavitra tsy manam-paharoa an'ny Light Iron - ao anatin'izany ny vahaolana amin'ny dailies, ny fanofana an-tserasera sy ny loko ary ny famaranana - manokatra varavarana ho an'ireo mpanatontosa sarimihetsika miasa na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao hiara-miasa amin'ny orinasa.
"Ny tantaran'ny Light Iron momba ny fizotran'ny asa fisoratana anarana miorina amin'ny fisie dia nametraka ny fototra mialoha ny fahafahanay lavitra," hoy i Hallen. “Nandritra izay 12 volana lasa izay, rehefa nitety ny areti-mandringana ny indostria dia voaporofo fa tena nanova lalao ny vahaolana lavitra ho an'ny dailies, ny famoahana ary ny famitana. Raha tokony hifantoka amin'ny toerana iray manokana ny mpanjifanay dia afaka misafidy ny hiasa amin'ny birao Light Iron marobe - ary avy amin'ny biraony sy tranony manokana - miaraka. Na aiza na aiza iasan'ny mpanao sarimihetsika dia afaka miara-miasa amin'ireo mpanakanto amin'ny toerana rehetra ampiasainay izy ireo. ”
Light Iron, orinasa Panavision, eken'ny besinimaro ho mpitarika teknolojia sy mpiara-miombon'antoka amin'ny kanto amin'ny famokarana farany sy vahaolana amin'ny paositra. Ny mpamokatra sary, ny studio, ny famoronana ary ny teknolojia dia miankina amin'ny fahaizan'ny Light Iron handefa ny alàlan'ny dizitaly mandroso, manomboka amin'ny dailies sy ny fitantanana data ka hatramin'ny serivisy arsiva miloko farany sy media. Miaraka amin'ny habaka sy toerana fampanofana an-tserasera manerana an'i Amerika Avaratra izay manome fahaiza-manao lavitra miaraka amina manerantany, ny Light Iron dia manampahaizana manokana amin'ny maha mailaka hanompo ireo filàna miavaka amin'ny tetikasa sarimihetsika sy fizarana. Araho ny orinasa amin'ny Facebook, Twitter, Instagram, Vimeo, na LinkedIn.
Evertz dia mampifangaro ny Zixi SDVP amin'ny fandefasana horonantsary IP - Aprily 12, 2021
SIGMA fp L sy Atomos Ninja V misy endrika lehibe vaovao ahafahana mampiasa 4Kp30 sy HDp120 ProRes RAW - March 25, 2021
Thai Monastery Wat Na Pa Pong dia miankina amin'ny NewTek TriCaster® sy NDI® handefa fampianaran'ny bodista tsy manam-potoana - March 24, 2021
Previous: SMPTE Hollywood Tackles TikTok amin'ny fivoriana Virtual March
Next: AP / mpamokatra zandriny